Puntland oo oo iska fogeysay eed uga timid Dowladda Fadaraalka | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland oo oo iska fogeysay eed uga timid Dowladda Fadaraalka
Maamul goboleedka Puntland ayaa iska fogeeyay eedeyn uga timid Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, taas oo ah in rasaas nool nool lala dhacay shacab ku bannaan baxayay degaanka dhahar.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda waqtigeedu dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo oo caan ku ah caburinta iyo caga jugleynta Shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan ayaa Maamulka Puntland ku eedeysay in ay rasaas nool nol u adeegsatay shacab dhigayay mudaharaad nabadeed.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay aad uga xun tahay falkii foosha xumaa ee maanta ka dhacay magaalada Dhahar ee Gobolka Sanaag oo ay ciidamada Amniga Puntland si ula kac ah xoog iyo xabad ugu adeegsadeen bulshada ku dhaqan magaaladaas oo samaynayay banaanbax nabadeed”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay DF.
Sidoo kale warkaan waxaa sii xoojiyay Sii-hayaha Wasiirka Qorsheynta, Jamaal M. Xasan, wuxuuna Puntland ku eedeeyay in ay mudaharaad nabadeed u adegsaday rasaas si ay dadka u kala raacdeyso.
Eedeyntaan, waxaa gaashaanka u duruuray afhayeenka Puntland Jaamac Dabaraani, oo abaabulka iyo qabsoomidda dibad-baxa ku eedeeyay Farmaajo iyo Jamaal M. Xasan.
“Mohamed Abdullahi Farmaajo iyo Jamaal Xasan, waxaad u abaabusheen banaabaxa si aad fowdo uga kicisaan Dhahar, Laakiin sida rabteen ma noqon, cidna kuma dhiman cidna kuma dhaawacmin nabad ayuu ku dhammaaday Ciidamaduna amniga ayeey sugeen. Abaabulada lagu khalkhal gelinayo xasiloonida iyo nabadgelyada waa qeyb ka mid ah rafashada Madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday”. ayuu yiri afayeenka Puntland.
Dowladda waqtigu ka dhamaaday ayaa isku dayaysa in ay carqalad ka abuurto gudaha maamulada aan taabacsaney, waxayna Puntaland ku eedeyneysa wax iyada dhaqan u ah, oo ah caburinta shacabka iyo dilka Siyaasiyiinta ka aragtida duwan.